ပင်စင်ရောဂါ | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
November 6, 2008, 4:32 pm
Filed under: E-Books, Essays And Stories
ကျွန်တော့် အနေနဲ့ဆရာဝန်ကို အပြစ်မတင်ပါဘူး……
ဒီလိုလုပ်ကိုင်ရနိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားတဲ့“စနစ်” တစ်ခုကိုသာ………
Comment by pi November 8, 2008 @ 8:50 am
စာအုပ်လေးတွေ မျှလို့ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ
Comment by MrDBA November 10, 2008 @ 1:16 am
လာဖတ်သွားတယ် ညီမလေး အစစ အဆင်ပြေပါစေ
Comment by pandora November 11, 2008 @ 1:46 pm
Comment by PAUK November 12, 2008 @ 3:37 pm
ကျေးဇူးပါ လင်းလက်ကြယ်စင်ရေ။ ဆရာမြသန်းတင့် ရဲ့ ပင်စင်ရောဂါလိုမျိုး အရှင်တို့ နိုင်ငံမှာလည် ဟိုမှာ သည်မှာမကြာမကြာတွေ့မြင်နေရတာပဲ။ ပင်စင်ယူသင့်ရဲ့မယူ .မယူသင့်ဘဲယူနေတာတွေကြောင့် ရွှေပြည်ကြီးဟာ ရွှံနွံထဲက မထွက်နိုင်ရှာကြသေးဘူးမဟုတ်လား။
Comment by twintaung November 13, 2008 @ 11:20 am
i just wanna sendamsg around burmese community.
my parents losts their passports yesterday around 5pm at peninsula plaza.
i’mabit hestitat to use the word ” LOST” because it wasn’t lost. it was stolen 😦
pickpocket took it from my mom’s bag.
if anyone find them please contact to the following number. 82514209.
Comment by Su November 14, 2008 @ 2:31 am
Comment by !i! November 15, 2008 @ 11:06 am
ညီမလေးရေ စာအုပ်လေးက အစလေးပေးထားကတည်းက စိတ်ဝင်စားလို့
ဒေါင်းလု ဆွဲသွားလိုက်မယ်။ ကျေးဇူးပဲ။ ဘာတွေလုပ်။ အဆင်ပြေနေလား။
Comment by chaos November 21, 2008 @ 7:38 am